Adventure – MMANIME
Inuyasha the Movie 3: Swords of an Honorable Ruler (2003) ................................................................. IMDb 7.7/10 MyAnimeList 7.8/10 ဒီကားက တော့ ခွေးမင်းသားဖန် တွေအကြိုက် တွေ့ စေမယ့်ကားပါ။ ဒီကားရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ ခွေးမင်းသားအဖေရဲ့ နှစ်ရာ ကျော်တိုင်ပျောက်ဆုံး နေတဲ့ပြိုင်သူကင်းဓါး ပေါ် အခြေပြုထားတာပါ။ အဲ့ဒီဓါးဟာ တက်ဆိုင်းဂဓါးနဲ့၊ ဆက်ရှိးမာရုကိုယ်တိုင်ပါ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တာတောင် အနိုင်မယူနိုင်တဲ့ဓါးပါ။ ခွေးမင်းသားရဲ့အဖေ မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂဟာ(သူ့နာမည်အတိအကျကို မန်ဂ မှာရော၊ anime မှာပါ သေချာမဖော်ပြခဲ့ပါ) လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၆၀၀တုန်းက သူ့ ခေတ်သူ့အခါတုန်းက မိစ္ဆာတွေ ရဲ့ လေးစားမှုကိုရခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ကာ နိပွန်(ဂျပန်)နိုင်ငံရဲ့အ နောက်ဘက်အခြမ်းမှာ သြဇာ ညောင်းခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးမင်းသားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ခွေးမင်းသမီးစီးရီးရဲ့အဓိကဗီလိန်ဖြစ်သူ ခီလွင်မာရုဟာ နိပွန်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်အခြမ်းကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မဟာမိစ္ဆာကြီးဖြစ်ပြီး မဟာ ခွေးမိစ္ဆာကြီးတိုဂကိုရှုးနိမ့်ဖူးကာ ဘယ်ဘက်ဦးချိုနဲ့ညာဘက် ခြေ ထောက်ပါဆုံးရှုးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၀၀၅ခုနှစ်မှာ တော့ နှစ်၅၀၀တစ်ကြိမ် ကမ္ဘာ ပေါ်ကိုကျ ရောက်လာမယ့် မိစ္ဆာကြယ်တံခွန်ကြီးရဲ့ကပ် ...
IMDB: 7.7/10 2165 votes
Ponyo(2008) IMDB: 7.7/10 Rotten Tomatoes: 91% Studio Ghibli ရဲ့ ဂ န္ထ ဝင် မြောက် လက် ရာ တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ် Miyazaki Hayao ကိုယ် တိုင် ရိုက် ကူး ရေး ဆွဲ ထား တဲ့ လက် ရာ တစ် ခု ဖြစ် ပြီး ယ နေ့ တိုင် ရိုး မ သွား နိုင် အောင် အောင် မြင် နေ ဆဲ ပါ ဒီ ရုပ် ရှင် လေး က တော့ လူ ဖြစ် ချင် ခဲ့ တဲ့ ရွှေ ငါး မ လေး ...
Castle in the Sky Title - Castle in the sky Aired - Aug 2, 1986 Studio - Studio Ghibli Genres - Adventure, Fantasy, Romance, Sci Fi Rating - PG-children Review ===== ဒီကားလေးကတော့ studio ghibli ရဲ့ပထမဆုံးလက်ရာကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။Old but gold လေးပါ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ Sheeta ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ Panzu ဆိုတဲ့ကောင်လေးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စွန့်စားခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်အတိုင်းပဲ Luputa လို့ခေါ်တဲ့ပျံသန်းနေတဲ့ဒဏ္ဍာရီလာနန်းတော်ကြီးကိုရှာပုံတော်ဖွင့်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့က အဲ့နန်းတော်ထဲကရတနာတွေကို လိုချင်နေတဲ့ဗီလိန်အဖွဲ့နဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ လမ်းခရီးမှာဘာတွေကြုံတွေ့ရမလဲ၊ Laputa နန်းတော်ကြီးရဲ့ပုံစံအမှန်ကရောဘလိုဖြစ်မလဲ၊ ဗီလိန်တွေကိုရောသူတို့ဘလိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ကြမလဲ ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး fantasy adventure ပုံစံမျိုးကြိုက်တဲ့သူတွေ့ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ================================= Translator - Nakhe Encode - TTK #otaku_kingdom_myanmar
IMDB: 8.0/10 155K votes
The Secret World of Arrietty (14) နှစ် အ ရွယ် င လက် မ လေး Arrietty ဟာ သူ(မ) ရဲ့ အ‌ ဖေ အ‌ မေ နဲ့ အ တူ အိမ် ဟောင်း ကြီး တစ် လုံး ရဲ့ ကြမ်း ပြင် အောက် မှာ ပုန်း ကွယ် နေ ထိုင် နေ ပါ တယ် ဒီ အိမ် ရဲ့ အိမ် ရှင် လေး Sho ရောက် လာ တဲ့ အ ချိန် မှာ တော့ သူ(မ) နဲ့ တွေ့ ဆုံ ပြီး ဘယ် လို အ ခြေ အ နေ ...
Howl’s Moving Castle Howl's Moving Castle ဒီကားရဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ အရမ်းလည်းပြောပြစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်ဗျ အဲ့တာကြောင့်အကျဉ်းချုပ်လောက်ပဲပြောလိုက်ပါ့မယ်ခင်ဗျ Review ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အရှက်အကြောက် အရမ်းကြီးတဲ့ Sophieဆိုတဲ့မိန်းကလေးကနေစတင်လိုက်ပါတယ်။ သူတိုခေတ်ကာလဟာမှော်ပညာတွေ စုန်းအတတ်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့။ Sophieဟာဦးထုပ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။တစ်ရက်မှာတော့ သူ့ဆိုင်လေးထဲကို ဆိုင်ပိတ်ချိန်ရောက်မှအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာအတင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့အမျိုးသမီးကိုသွားခိုင်းပေမယ့်လည်းမသွားခဲ့တဲ့အပြင် Sophieကိုလည်းကျိန်စာတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျိန်စာတိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ အဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ဆိုင်ကထွက်သွားပါတော့တယ်။Sophieကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ကျိန်စာကတော့ လက်ရှိအသက်အရွယ်ကနေအသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်အဘွားကြီးအရွယ်အဖြစ်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်တာပါ။အဘွားကြီးပီပီ ဒူးတွေခါးတွေကလည်းထင်သလောက်မကောင်းတော့တာကြောင့် သူဒီကျိန်စာကိုပျောက်အောင်လုပ်ဖိုနည်းလမ်းရှာရပါတော့တယ်။Sophieဟာအဲ့နယ်မှာနာမည်အရမ်းကြီးတဲ့မှော်ဆရာဖြစ်တဲ့Howlဆိုတဲ့လူရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖိုကြိုးစားပါတော့တယ်။Sophieဟာ Howlကိုရှာတွေ့ပါ့မလား..... Howlကကောဘယ်လောက်အထိအစွမ်းထက်တာလဲ.... ဟိုအမျိုးသမီးကကော ဘာကြောင့်Sophieကိုကျိန်စာတိုက်ခဲ့လဲဆိုတာတွေကတော့..... ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာ....
Space Pirate Captain Harlock (2013) IMDb - 6.4/10 Rotten Tomatoes - 54% MyAnimeList - 7.4/10 ဒီကားကတော့ Terminator, Avatar, Titanic, Alienဇာတ်ကားတွေရဲ့ဟောလီဝုဒ်ဒါရိုက်တာကြီး James Cameronကိုယ်တိုင်အရမ်းကြိုက်ပါတယ်လို့ချီးကျူးခံရပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လူမသိသူမသိကပ်ကျော်နေတဲ့ဇာတ်ကားပါ။ ဒီကားရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်တွေထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Captain Harlockဆိုတာဟာ animeလောကရဲ့ရွှေခေတ်ဖြစ်တဲ့ 1980ဝန်းကျင်လောက်မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကောင်ပါ။ ဆိုတော့ကာ ရွှေခေတ်က နာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကို 3D animationနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ 1980လောက်က ထွက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုကြည့်ဖို့လိုမလားဆိုပြီးမေးလာခဲ့ရင်တော့ မလိုဘူးလို့ပဲပြောပါရစေ။ ဒီကားဟာ အရင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုrebootပြန်ရိုက်တာပြောလို့ရသလို Captain Harlockရဲ့နောက်ခံဇာတ်ကြောင်းကိုပြသတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလည်းပါတဲ့အတွက် ဒီကားတကားထဲကြည့်ရုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရရင်တော့ ဟိုရှေးရှေးတုန်းကလို့ပြောရမလား လာမယ့်အနာဂတ်မှာလို့ပြောရမလား အဲ့ဒီအချိန်မှာ လူသားဦးရေအရမ်းများပြားလာတဲ့အတွက် ကမ္ဘာပေါ်ကအရင်းအမြစ်တွေမလောက်မငှဖြစ်လာလို့ လူသားတွေဟာ အာကာသထဲထွက်ပြီး နေထိုင်လို့ရမယ့်‌နယ်မြေသစ်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ရှာခဲ့ပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးလိုနေဖို့သင့်တော်တဲ့ဂြိုဟ်မျိုး ရှာမတွေ့တဲ့အတွက် မိခင်ကမ္ဘာကြီးဆီပ‌ဲ ပြန်လာဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့လိုအလုအယက်ပြန်လာဖို့လုပ်ရင်းကနေ စစ်ကြီးတခုပါထဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဗဟိုအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းပြီး ကမ္ဘာမြေကိုမြင့်မြတ်နယ်မြေအဖြစ်ကြေညာခဲ့ကာ ဘယ်သူ့ကိုမှခြေချခွင့်မပေးခြင်းဖြင့် စစ်ကြီးကိုရပိတန့်သွားအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အာကာသဓါးပြကြီး ကပ္ပတိန်Harlockဆိုတဲ့လူရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ကာ ဗဟိုအစိုးရကိုပုန်ကန်ပါတော့တယ်။ - အဲ့ဒီကပ္ပတိန်Harlockဆိုတဲ့လူကိုဘယ်သူလဲ - ဗဟိုအစိုးရကိုဘာလို့ပုန်ကန်ဖို့လုပ်နေရတာလဲ - ဗဟိုအစိုးရမှာရော လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေလားဆိုတာကို ...
IMDB: 6.4/10 11,568 votes
Inuyasha the Movie 2: The Castle Beyond the Looking Glass ဒီကားရဲ့ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရရင်တော့ ဂျပန်ရိုးရာပုံပြင်တွေထဲကတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ နတ်သမီးနဲ့လူသားညားတဲ့ပုံပြင်ကိုအခြေခံထားတာပါ အဲ့ဒီပုံပြင်က မြန်မာရိုးရာပုံပြင်တွေထဲက ပင်းတယလှိုဏ်ဂူရဲ့ပုံပြင်နဲ့နည်းနည်းဆင်သလို ဘုရင့်သမီးတော်ဟာ သူ့ကြင်ဖက်ကို ပညာစမ်းပြီးရွေးတဲ့မြန်မာရိုးရာပုံပြင်တွေနဲ့လည်း နည်းနည်းတော့တူပါတယ် ဒီကားမှာမူရင်းစာဖိုင်မှာသီချင်းစာသားမပါဘူးဗျ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တကြောင်းချင်းtimingတွေကိုက်ပြီးထည့်ရတာမလို့ အသံထွက်အမှားပါရင်သည်းခံကြပါကုန် ခွေးမင်းသားရဲ့ဇာတ်ဝင်တေးတွေကကောင်းလေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အခုရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်ဝင်တေးလည်း နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ် IMDbမှာတော့ 7.5/10အထိရထားပြီး MyAnimeListမှာ 7.7/10 Rotten Tomatoesမှာ 92%အထိအသီးသီးရထားတော့ ကောင်းမကောင်းတအားကြီးညွှန်းဖို့မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါ Translated by DrNyan Encodedby Swan Yi
IMDB: 7.6/10 75 votes
Goblin Slayer: Goblin’s Crown Goblin Slayer and his party head up to the snowy mountains in the north after receiving that request from the Sword Maiden to find any information on the Noble Fencer that disappeared after leaving to slay some goblins. A small village gets attacked, they encounteramysterious chapel, and something about how these goblins are acting bothers the Goblin slayer. ...
White Snake ဒီကားလေးကတော့ chinese anime လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် chinese anime တွေကိုဖန်တီးတဲ့ Light Chaser Animation Studios ကနေဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး ကြာမြင့်ချိန် တစ်နာရီနဲ့သုံးဆယ့်ငါးမိနစ်ကြာမြင့်ပါတယ် IMdb rating မှာ7ရရှိထားပါတယ် တစ်နေ့မှာ Blanca လို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအနီးအနားရွာကမြွေဖမ်းသမား Xuan ကကယ်တင်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်သူမဟာမှတ်ဉာဏ်တွေပျောက်ဆုံးသွားပြီး သူမအကြောင်းကိုသိဖို့ သူတို့နှစ်ယောက်သားခရီးအတူထွက်ခဲ့ကြတယ် သူမရဲ့အတိတ်အကြောင်းပိုပြီးသိလာတာနဲ့အမျှ ဟန်ချက်ညီနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ကံတရားရှိတဲ့ စွမ်းအားအတွက် ယှဥ်ပြိုင်နေတဲ့သဘာလွန်စွမ်းအားတွေရဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့အကြံအစည်တွေကို သိသွားခဲ့တယ် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စွန့်စားခန်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ #LCAM
Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul ဒီ Moive3ကတော့ ရှေ့ထွက်ပြီးတဲ့ Movie 1,2 ရဲ့အဆက်အနေနဲ့ထွက်လာတာပါ Riko နဲ့ Reg တို့နှစ်ယောက်ထဲ Abyss ထဲကိုစွန့်စားခန်းထွက်လာရင်း Nanachi ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ သူတို့သုံးယောက်အတူတူ Abyss ရဲ့အောင်ခြေကိုမရရအောင်ခရီးထွက်လာရင်းနဲ့ တွင်းနက်ကြီးရဲ့ ငါးလွှာမြောက်မှာ "အရုဏ်ဉီးတို့ရဲ့ အရှင်" လို့တင်စားရသူ Bondrewd နဲ့တွေ့ပါပြီ Bondrewd မှာ မွေးစားသမီးဖြစ်သူ Prushka ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ် Riko တို့သူငယ်ချင်းသုံးယောက် Bondrewd ကြီးအုပ်စိုးတဲ့ ငါးလွှာမြောက်ကို အခက်အခဲတွေကျော်လွှားပြီး သူတို့သွားမဲ့ခရီးကိုဆက်သွားနိုင်ပါ့မလား Bondrewd ကြီးကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ Nanachi ကလည်း သူ့ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီလူကြီးအကြောင်းကိုသိနေပြီ အဲ့တာတွေအပြင် Reg နဲ့ Bondrewd တို့ရဲ့ Epic ဆန်တဲ့ တိုက်ပွဲကိုလည်းကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် Translated by Duck & Bahamut Encoded by Kichiro #KichiroANIME
IMDB: 8.2/109votes